Bayaanka Uu Soo Saaray Ururka SRDA. – Xeernews24
Bayaanka Uu Soo Saaray Ururka SRDA.
17. Januar 2019 /in Qormooyin/Articles /von admin
Cambaarayn; Ururka SRDA waxa uu cambaaraynayaa falkii gurracnaa ee maamulka canfartu, u geystay shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan galbeedka sitti–Soomaali State. Falkaas oo xasuuq, barakicin, boob hantiyeed iyo jidh dil isugu jira, isla markaana la gula kacay shacab masaakiin ah oo aan waxba galabsan. Illaa iyo hadda inta la xaqiijiyey dhimashadu waa19–qof alle ha u naxaraiisto e, dhaawac badan na waa jiraa! Waxaa jira khasaare laxaad leh oo naf iyo maal ba leh!
Colaaddan oo muddo ba soo taagnayd ayaa waxaa sababay; dhul soomaaliyeed oo si sharci-darro ah lagu hoos geeyey maamulka canfarta. Shacabka ayaan haba yaraatee wax afti ah laga qaadin, waxaa lagu qasbay inay hoos tagaan maamulka canfarta, arrintaas oo baal marsan sharciga dowladda federaalka ah.
Dowladda dhexe waxaan ugu baaqaynaa inay tallaabo sharciga waafaqsan ka qaaddo dowlad deegaanka canfarta oo si badheedh ah ugu xad gudbaya muwaadiniinta soomaaliyeed oo aad mooddo in la gacan bidixaynayo. Ilaa iyo hadda xukuumadda Abiy Ahmed ma ayna qaadin tallaabo lagu diirsado oo lagu badbaadinayo nolosha shacabka soomaaliyeed.
Maamulka soomaali state waxaan ugu baaqaynaa inuu guto waajibaadkiisa shacabka uu masuulka ka yahayna uu uga hiiliyo cadowga hororka ah ee gumaadaya iyada oo la marayo waddo sharciga waafaqsan! Dadkii la dhibaateeyey; ma jirin wax gurmad ah oo ka soo gaadhay dhinaca maamulka somali state. Waxaa jiray waxyaabo badan oo la qaban karay; haddii ka go’aansho la helo.
Ururka SRDA waxa uu ku baaqayaa in xalwaara laga gaadho colaadda ka aloosan gobolka sitti, is afgarad iyo xasillooni na lagu soo dabbaalo si noloshada dadku caadi ugu soo noqoto. Ururku waxa uu ballan qaadayaa in uu dhankiisa ka xoojin doono wax walba oo lagu qaboojinayo colaadda halkaas ka oogan, si cadcadaani ku dheehan tahayna uga qaybqaadan doono inta awooddiisa ah inshaa allah!
Ugu danbayntii waxaan tacsi tiiraanyo leh u diraynaa ehelladii iyo qaraabadii ay ka bexeen dadkoogii ay jeclaayeen. Ilaahay waxaan uga baryeynaa inuu u naxariisto intii dhimatay, kuwa dhaawaca ah na uu shaafiyo oo nabar gardarro alle uga dhigo. Iyagana samir iyo iimaan ka siiyo. Waan ka xun nahay in dhibaato loo gaysto shacab soomaaliyeed oo aan waxba galabsan!
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2019/01/bayaan1.jpg 237 492 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-01-17 23:36:532019-01-17 23:36:53Bayaanka Uu Soo Saaray Ururka SRDA.
Daawo Ficiladda Foosha-xun ee Liyuu Booliska Canfartu ka geystay Magaalada ... Daawo:Muqaal Qurux badan dhaqanka Soomaalida iyo Gabdhaha reer Diridhaba.